R/W Rooble oo xil cusub u magacaabay Bashiir Goobe – WARSOOR
R/W Rooble oo xil cusub u magacaabay Bashiir Goobe
MUQDIAHO – (WARSOOR) – Ra’isul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xil u magacabay Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe), kadib markii uu fashilmay isku daygii loogu magacaabay taliyaha NISA.
Wareegto kasoo baxday xafiiska Rooble ayaa Bashiir Goobe loogu magacaabay Wasiiru Dowladaha Wasaaradda Howlaha Guud iyo dib u dhiska Soomaaliya.
Magacaabista uu sameeyey Rooble ayaa waxay qeyb ka aheyd heshiiskii ay dhawaan gaareyn isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya ee waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo lagu soo afjaray khilaafkii mudada u dhaxeeyey ee ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa horey Bashiir Goobe ugu magacaabay taliyaha ku-meel gaarka ah ee Hey’adda NISA, waxaana arrintaas si weyn uga hor yimid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna xilkaas u magacaabay Yaasiin Farey.
Khilaafka Farmaajo iyo Rooble ayaa muddo socda, waxaana ugu dambeyn loolanka ku adkaaday Farmaajo ayada oo taliyaha NISA uu sii hayo Yaasiin Farey illaa laga soo magacaabayo taliye kale, oo aan la ogeyn xilliga ay dhaceyso.
Rooble ayaa la rumeysan yahay inay cadaadisay dowladda Qatar kadib socdaalkii uu ke tagy dalkaas, taasi oo horseeday inuu ugu dambeyn la heshiiyo Farmaajo, oo uu ogolaado inuu ka tanaasulo xilkii uu u magacaabay Bashiri Goobe.
Xaflad Lagu Daahfurayay Sanduuqa Daryeelka Macalimiinta Oo Lagu Qabtay Gebilay